I-Mentor Match Programme - Inhlangano Yezikhungo Zokubhala Yamazwe Ngamazwe
Uhlelo lwe-IWCA Mentor Match Programme luhlinzeka ngamathuba okuqeqesha ochwepheshe besikhungo sokubhala. Uhlelo lumisa ukufana komeluleki kanye nabaqeqeshi, bese labo ngababili baxoxa ngezinjongo zabo zokubamba iqhaza ohlelweni, banqume izindlela ezingcono kakhulu zokufeza leyo migomo, futhi bachaze imingcele yobudlelwano babo, okuhlanganisa imigudu efanele yokuxhumana kanye nezikhathi zokubhalelana. Ngenxa yokuthi uhlelo luthatha indlela engeyona eye-dyadic, abeluleki kanye nabaqeqeshi bakhuthazwa ukuthi babelane ngolwazi futhi bafunde komunye nomunye, futhi ngaleyo ndlela, izinhlangothi zombili ziyazuza ebuhlotsheni bokuqondisa.
Ukufaneleka kanye Nomugqa Wesikhathi
Abeluleki kanye nabeluleki banganikeza ukwesekwa komunye nomunye. Bangase:
Xhumana nozakwethu emazweni ngamazwe, kuzwelonke, nasezifundeni zabo.
Xhumana ngokuthuthuka kobungcweti, ukubuyekezwa kwenkontileka, kanye nokuphakanyiswa
Nikeza impendulo ekuhloleni nasekufundeni.
Khonza njengombuyekezi wangaphandle wokuhlola isikhungo sokubhala.
Khonza njengesethenjwa sokwenyusa.
Khonza njengesihlalo kumapaneli wenkomfa.
Phendula imibuzo efuna ukwazi.
Nikeza ngemibono yangaphandle mayelana nezimo.
Wonke amalungu e-IWCA afanelekile ukubamba iqhaza kuHlelo Lokufanisa IWCA Mentor. Uhlelo lusebenza ngomjikelezo weminyaka emibili, futhi umjikelezo olandelayo we-Mentor Match uzoqala ngo-Okthoba ka-2023. Abadidiyeli Be-IWCA Mentor Match Co-Coordinators bazothumela inhlolovo kuwo wonke amalungu e-IWCA ngo-August 2023 bewamema ukuthi abambe iqhaza ohlelweni. Inhlolovo ibuza imibuzo embalwa mayelana nezinjongo zelungu le-IWCA zokubamba iqhaza ohlelweni kanye nesikhungo sabo. Abadidiyeli babuyekeza lolu lwazi ngokucophelela ukuze baqondanise abeluleki nabeluleki abanezinhloso ezifanayo kanye/noma izikhungo. Uma Abaxhumanisi bengakwazi ukufanisa umeluleki noma umluleki, bazokwenza konke okusemandleni abo ukuze bathole umeluleki/ofundiswayo ofaneleka kahle, bakhe iqembu lomeluleki labahlanganyeli abangenakuqhathaniswa, futhi/noma babaxhume kwezinye izinsiza zesikhungo sokubhala.
Uma ungathanda ukubamba iqhaza ekusebenzelaneni nokweluleka ngaphandle komjikelezo wethu ovamile weminyaka emibili, sicela uxhumane Nabaxhumanisi (bona imininingwane yokuxhumana ngezansi) ukuze ufunde ukuthi yimaphi amathuba atholakalayo.
"Ukuba ngumeluleki wohlelo lwe-IWCA Mentor Match kwangisiza ukuba ngicabangisise ngokuhlangenwe nakho kwami, kwaholela ebudlelwaneni obufanele nozakwethu oyigugu, futhi kwangikhuthaza ukuthi ngibheke ukuthi ukuqeqeshwa ngobungcweti kuholela kanjani ekuqondisweni kwezigwegwe."
UMaureen McBride, University Nevada-Reno, Mentor 2018-19
“Kimina, ithuba lokululeka omunye umuntu lalinezinzuzo ezimbalwa. Ngikwazile ukukhokhela okunye ukwesekwa okuhle engikuthole ngokwethukela kule minyaka edlule. Ubudlelwano bami nomeluleki wami bukhulisa isikhala sokufundana lapho sobabili sizizwa sisekelwa umsebenzi esiwenzayo. Ukubamba lesi sikhala kubaluleke kakhulu kithina esingazizwa sisodwa ezikhungweni zethu zasekhaya noma eminyangweni ekhulunywayo. ”
UJennifer Daniel, Queens University of Charlotte, Mentor 2018-19
Uhlelo lwe-IWCA Mentor Match luhlinzeka ngochungechunge lwemicimbi minyaka yonke yabeluleki kanye nabaqeqeshi. Sicela uvakashele i- I-IWCA Mentor Match Events Isheduli ukuze ubone uhlu lwamanje lwemicimbi.
Uma unemibuzo mayelana nohlelo lwe-IWCA Mentor Match, sicela uthinte I-IWCA Mentor Match Co-Co-Coordinators uMaureen McBride kokuthi mmcbride @ unr.edu kanye no-Molly Rentscher kokuthi molly.rentscher @ elmhurst.edu.